एजेन्सी–ढेड महिना अघि म्यानचेस्टर युनाइटेडको अन्तरिम प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका ओले गनर सोल्सारले प्रिमियर लिगको उत्कृष्ट प्रशिक्षक अवार्ड जितेका छन् ।
प्रिमियर लिग आयोजकले शुक्रबार राति ओलेलाई जनवरी महिनाको उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्ड प्रदान गरेको हो । ओलेसँगै युनाइटेडकै स्ट्राइकर मार्कुस रास्फोर्डले प्लेयर अफ दी मन्थ अवार्ड जितेका छन् । रास्फोर्डले जनवरीमा ६ खेल खेल्दै तीन गोल गरेका थिए ।
चर्चित प्रशिक्षक जोसे मोउरिन्होले लिगमा राम्रो नतिजा निकाल्न नसकेको भन्दै युनाइटेडले मोउरिन्होलाई बर्खास्त गरेपछि ओलेले अन्तरिम प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका थिए । ४५ बर्षीय ओलेको प्रशिक्षणपछि युनाइटेडले खेलेका १० खेलमा नौ जित हात पारेको छ । युनाइटेड लिगमा अहिले पाचौं स्थानमा छ ।
ओले म्यानचेस्टर युनाइटेडमा सर एलेक्स फर्गुसनपछि यो उपाधि हासिल गर्ने पहिलो प्रशिक्षक पनि बनेका छन् । यसअघि सन् २०१२ मा फर्गुसनले यस उपाधि जितेका थिए । जनवरी महिनाको उत्कृष्ट प्रशिक्षक बन्ने क्रममा हओलेले बर्नलीका सन डाइस र साउथह्याम्पटनका राल्फ हासनहटललाई पछाडि पारे ।
बार्सिलोनाको कठिन जित, मेस्सीको निर्णायक गोल
मैदानमै मनाए विकेश कुथुले जन्मदिन
नेपाली फुटबलमा भित्रियो जीपीएस ट्र्याकर प्रविधि
झिनो बन्दै नेपालको पदक सम्भावना
हङकङसँग पनि हार्‍यो नेपाल, एसिया कप खेल्ने सपना अधुरै
ललितपुरले बिराटनगरलाई दियो १०५ रनको लक्ष्य
विश्वकपमा नछानिएको इटालीमा फुटबल क्रान्ति !
रेफ्रीविरुद्ध प्रशिक्षकः जायज असन्तुष्टि कि कमजोरी लुकाउने अस्त्र ?
सन्दीप जोरा एक रनमा आउट